Swan oo masuuliyiinta dalka Qatar kala hadlay arimaha Somalia | Xaysimo
Home War Swan oo masuuliyiinta dalka Qatar kala hadlay arimaha Somalia
Swan oo masuuliyiinta dalka Qatar kala hadlay arimaha Somalia
Ergeyga gaarka ah ee xoghayaha Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya, Amb. James Swan oo saacadihii u dambeeyay ku sugna dalka Qatar, ayaa kulano kala duwan la qaatay mas’uuliyiin ka tirsan dowladdaasi.
James Swan ayaa kulan muhiim ah la qaatay Wasiirka arrimaha dibadda ahna ra’iisal wasaare ku -xigeenka dalkaas, Sheikh Mohamed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, kaasi oo ay kaga wada-hadleen xaalada Soomaaliya.
Kulankaasi ayaa sidoo kale waxa diirada lagu saaray xiriirka Qaramada Midoobey iyo Qatar, iyada oo lagu soo hadal qaaday marxalada kala guurka dalkeena iyo doorashada kusoo wajahan, oo maalmihii u dambeeyay uu dul hoganayey muran baahsan.
Dowladda Qatar ayaa xiriir wanaagsan la leh dowladda federaalka Soomaaliya, iyada oo la rumeysan yahay inay galaan-gal xoog leh ku leedahay Villa Somalia, taasi oo meesha ka saartay xiriirka dowladdo kale oo carbeed.
Kulankan ayaa imanaya iyada oo uu soo baxayo guux aan si dhab ah loo ogeyn oo la xiriira in dowladda Qatar ay gacan xoogan ka geysanayso soo laabashada madaxweynaha hadda talada haya, oo wajahaya loolan adag.
Si kastaba, James Swan ayaa inta uu ku sugan yahay dalka Qatar kulamo kala duwan la qaadan doona mas’uuliyiin kale oo ka tirsan dowladaasi.